Kugadzirira kweTalend Data: Nyore Pinda, Chenesa uye Gadzirira Yako CRM Dhata | Martech Zone
Tend Data Kugadzirira: Nyore Pinda, Chenesa uye Gadzirira Yako CRM Dhata
Chishanu, February 19, 2016 Chishanu, February 19, 2016 Douglas Karr
Iwe uchangobva kudzoka kubva pavhiki mu Vegas kushanda imwe indasitiri tradeshow. Wakaneta, wakasaririra kumashure paemail uye mamwe mapurojekiti, uye une zvikepe zvakawanda zvezvitsva zvinotungamira zvinoda kugoneswa uye kupinda muCRM system yako. Kutarisa kune iro rakakura rakakura pepanhau remazita, iwe unoziva kuti zvichakutora iwe zuva rese kugadzirisa data rekubata.
Kupinda nemaoko uye kuchenesa data rako kwakafanana nekutarisa pendi yakaoma-inovhiringidza pfungwa uye inouraya nguva. Zviri kumusoro uko nekuenzanisa rako rekutarisa, uchigadzira ndiro nekuchenesa kunze kwegaraji.
Nekudaro, yakachena data chikamu chakakasharara chekushambadzira nekutengesa maitiro. Imwe nzira ndeye marara-mukati = marara-kunze. Kuunza uye kuendesa isina kugadzirira dhata kunogona kutungamira kune zvinogumbura mhedzisiro uye kutambisa nguva nemari. Zvakanaka, ko kana paine chishandiso chiri nyore kuseka icho chakaderedza iyo nguva yaitora yekuchenesa uye fomata data rako kubva maawa kusvika maminetsi?
Nekutenda iyo inopenya data pfungwa pa Talend inzwa kurwadziwa kwako uye wapindura nemhinduro nyowani inonzi Talend Kugadzirira. Iyi nyowani, yemahara desktop application inoita kuti iwe uongorore, uchenese uye ubatanidze data kubva kwakasiyana masosi mumaminetsi nematombo, anonongedzwa maturusi anokufamba nenzira iyi. Zvakafanana nokutora kufamba mupaka…
Ndizvozvo, iwe unoverenga pano kutanga vana! Saka tanga kuronga masikati emutambo webhasikiti kana manicure / pedicure nekuti wave kuda kutora HOURS kudzoka muzuva rako. Ok, pamwe ndiri kuva tad zvakare ane tariro kumberi uko, asi mune zvese zvakakomba, Talend Kugadzirira Kwe data, inokutendera iwe kurega kushandisa kushandisa yakakosha nguva kuchenesa uye crunching dhata uye tarisa zvaunoedza kuita pane mamwe mabasa ehunyanzvi sekuongorora ROI yechiitiko chakazara uye ugone kugovana ruzivo irworwo nechikwata chako (kukuwanira mapoinzi makuru e brownie -Bhonasi !!)
Heino tarisiro yekuti sei Talend Kugadzirira zvinogona kuita kuti basa rako rive nyore. Kutanga, ngatitarisei mamwe ematanho aunotora kana uchiverenga dhata rekuongorora kuitira kuti tione kana iyo yazvino tradeshow yaive neakakosha ROI. Kutanga kuenda, yako yakashata data inogona kutaridzika sechinhu chidiki seichi:
Iye zvino unofanirwa kutarisa iyo data kuti inyatsoita sei; chengetedza kukosha kwakashandiswa - kureva Mr. vs. Mai kana Ms .; chengetedza kuti ruzivo rwakazara munzvimbo dzese; bvisa zvakapetwa zvinyorwa; shandura uye simbisa iyo data; kurodha iyo data mune yako Kushambadzira Yekutengesa yeCRM system uye pakupedzisira gadzira uye gadzira dhatabhesi dhizaini inosanganisa akasiyana matanho.
Wakaneta here? Ndiri… uye maziso angu ari kupenya nekutarisa pane rakafanana spreadsheet kwemaawa matatu apfuura….
Kuzivisa Talend Kugadzirira Kwe data
Zvino, neTalend Kugadzirira Dhata, iwe unogona kuwana, kuchenesa uye kugadzirira data mune yakapusa, intuitive nzira. Kutanga, iwe paunopinda chishandiso, zvinokukurudzira neye pop-up gwara rekupinza yako Excel faira kana mamwe marudzi ezvinyorwa zvinyorwa. Wobva wasarudza iro rimwe chete pepanhau uye nekungobaya mashoma iwe unogona kuchenesa, kuenzanisa, kupedzisa minda uye kusefa iyo data nedunhu, zita rebasa, nezvimwe kuitira kuti uwane nzwisiso iri nani muhunhu hwenongedzo dzako nyowani. Yako yaimbova yakashatisa spreadsheet ikozvino inotaridzika seiyi:
Iye zvino unogona kuendesa nyore nyore data rakacheneswa muTafura kuitira kuti chiitiko chinotevera chiite zvirinani. Pamusoro pezvo, sezvo wanga uchisarudza nekuchenesa nzvimbo dzakasiyana muspredishiti yako, Talend Data Kugadzirira yanga ichichengetedza rekodhi yesarudzo idzodzo. Sarudzo dzaunoita dzinobva dzaita 'recipe' iyo yaunogona kuchengeta pane faira kuitira ramangwana rekunzvenga rework. Saka kekutanga nguva yaunoshanda nedata, iwe unochengetedza nguva. Asi kana iro data razorodzwa (kureva pakuratidzwa kwegore rinouya), haungoderedze nguva chete, asi iwe unobvisa basa rinodiwa zvachose! (Zvino iwe zvechokwadi une imwe yemahara nguva muzuva rako kweinenge kofi yekuzorora kana kufamba nepaki panguva yemasikati).
Hazvisi zveVashambadzi chete
Talend Kugadzirira yakafananidzirwawo zvakakwana kune vashandi vezvinhu uye mabhenefiti manejimendi, vanoongorora bhizinesi nevezvemari, kana chero basa rinoshandisa nguva yakawanda vachishanda nedata kana kubvarura bvudzi ravo pamusoro pemaspredishiti. Saka kunyangwe iwe uri kuchenesa tradeshow inotungamira, uchiverenga iko kumusoro kweanogona kuwana, kuongorora kutengeserana kana kuyera akanakisa mazino, chiono, inishuwarenzi yehupenyu uye anochinjika mashandisirwo emashandisirwo ekambani yako - ikozvino kuwana kune njere kungori bhatani kure!
Iwe wakajeka uye wakanaka pane zvaunoita-saka nei uchifanira kushandisa yakawanda nguva kupopotedzana dhata uchigovana zvaunonzwisisa nechikwata chako? Saka ikozvino, chaizvo mubvunzo wega waunofanirwa kunge uchizvibvunza ndewekuti: Ndingauwana kupi? !!!
Dhawunirodha yako yemahara vhezheni yeTalend Dhata Kugadzirira Nhasi!
Tags: CRMDatautsanana hwe datagadziriro yedatakugadzirisa datatalendtalend data kugadzirira
10 Email Kutevera Metric Iwe Unofanirwa kuve Kuongorora